Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyaha Shiinaha Lixin
Raadinta kubbadda riixitaanka waxay ka kooban tahay saddex qaybood: dhaqe kursi, mashiinka dhaqe iyo qafis kubbad bir ah. Waa nooc ka mid ah xambaarsan. Dhaqeyaha usheeda dhexe iyo dhaqe kursi ayaa laga sooci karaa qaybta qafiska iyo kubbada birta. Waxay qaadi kartaa culeyska axial, laakiin ma aha culeyska shucaaca.
Marka loo eego walaaca, soo-qaadista kubbadda riixitaanka waxaa loo qaybin karaa hal-jiheynta kubbadda riixidda iyo laba-jibaarta dhalista kubbadda.
Iftiiminta kubbadda riixitaanka ee jihada keli ah waxay ka kooban tahay laba dhaqe oo leh waddooyin orod iyo kubbado lagu hago qafis. Maydhayaashu waxay leeyihiin sagxad fadhida oo fidsan, waana sababtaas sababta ay tahay in loo taageero si dhammaan kubbaduhu si siman u raran yihiin. Xirmooyinku waxay qaadaan culeyska axial hal dhinac kaliya. Ma awoodaan inay qaadaan xoogag shucaac ah.
Jihooyinka labajibbaaran ee kubbadda riixidda leh waxay leeyihiin laba qafas oo kubbado ku dhex jiraan dhaqeyaha usheeda dhexe iyo laba maydhasho guri oo leh sagxad fadhida. Maydhaha usha ayaa labada dhinacba leh dariiqyo lagu ordo oo lagu dhejiyo joornaalka. Xirmooyinku waxay awoodaan inay qaadaan labada dhinacba xoogag axial ah.
Fiiro gaar ah:Kani waa kaliya nambarka moodalka qayb yar oo ka mid ah taayirrada duubista ee Taper ee aan haysanno, haddii aad ku guuldareysato inaad hesho midka aad u baahan tahay, fadlan si toos ah noola soo xiriir. Waad ku mahadsan tahay horay.
Xidhmada A.tube + kartoonka dibadda + sariiraha
B. sanduuqa keli ah + kartoonka dibadda + sariirtaha
Xidhmada C.tube + sanduuq dhexe + kartoon dibadeed + sariirta
D. Sida ku cad codsigaaga
1.Shaqaalaha macaamilka ayaa si buuxda loo fahmay iyadoo diiwaanno badan la sameeyay si waqtiga macaamiisha loo badbaadiyo.
2.Waxaan si taxaddar leh u fiirineynaa sawirrada macaamiisha, waxaan u soo gudbineynaa farsamayaqaannadayada waxaanan sameynnaa jawaabo sax ah.
3.Waan ugaarsannaa adeegga gaarsiinta ugu dhaqaalaha badan si loo yareeyo qiimaha macaamiisha.
4.Waxaan u soo sheegnaa xaaladda wax soo saarka waqti kasta macaamiisha.
5.Adeega iibka kadib waa mid la isku halayn karo oo ra'yiga macaamiisha si dhab ah ayaa loo tixgeliyaa.
Isbedelka suuqa ugu dambeeyay ayaa had iyo jeer la siiyaa macaamiisheena.
Hore: Kubad birta aan lahayn
Xiga: Rullaluislaha irbad
Xiriiriyaha Xagasha Dhigista Kubadda Dhasha
Kubadda riixista 51103
Kubadda riixidda 51212
Riix Ball dhalista Ball
Kubadda naxaasta, Kubadaha Copper -ka Yar, H62 Kubadda Naxaasta, Madax Ball Check naxaas, Kubbadda Naxaasta ee Adag, Kubadda naxaasta ee H65,